नायिका प्रीयंका कार्कीपछि गरिमा पन्त, हेर्नुस् बेबी बम्प लुक्स (फोटो फिचर) – Dailny NpNews
नायिका प्रीयंका कार्कीपछि गरिमा पन्त, हेर्नुस् बेबी बम्प लुक्स (फोटो फिचर)
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ०३, २०७८ समय: ११:०६:३६
नेपाली सिने उधोगमा यतिबेला नायिकाहरु आमा बन्ने लहर चलेको छ । नायिका प्रीयंका कार्की, ऋचा शर्मा, गरिमा पन्त र कलाकार रक्षा श्रेष्ठ यतिबेला आमाको अनुभुती गरिरहेकी छन् । यी सबैको विवाह भएको खासै धेरै वर्ष बितेको छैन । कोरोना महामारीले जारी लकडाउन संगै सिने उधोग ठप्प बन्दा फुर्सदिलो बनेका यी अभिनेत्रीहरुलाई आमा बन्ने अवसर जुटेको बुझ्न सकिन्छ ।
यी आमाको अनुभुती लिन तयार रहदै गरेकी मध्ये प्रीयंका कार्कीको निकै चर्चा, आलोचना र ट्रोल भएपनि अन्यको भने खासै चर्चा भएको देखिन्न । देखियोस पनि कसरी ? प्रीयंका बाहेक ऋचा, गरिमा र रक्षाले फोटो खिच्नमा खासै जुक्ती अर्थात कन्सेप्ट लगाएको देखिदैन । त्यसैले पनि चर्चाबाट अलग्गिएका हुन कि ? तरपनि आफ्ना पेटमा रहेका सन्तानलाई भने फोटो खिच्दै सामाजिक संजालमा देखाई रहेका छन् ।
यसको दोश्रो स्थानमा पर्छिन् अभिनेत्री गरिमा पन्त । उनले सामाजिक संजालमा आफ्नो आगन्तुक सन्तानलाई फोटोमा देखाई रहेकी छन् । उनले पोस्ट गरेको पछिल्लो पोस्टका अनुसार उनी गर्भवती भएको ७ महिना पुगेको छ । उनी अब सुत्केरी हुनलाई केही महिना मात्रै बाकी छ । हाल नेपाली सिने उधोगबाट टाढा रहेकी पन्त श्रीमान सहित अमेरिकामा छिन् । अब उनी उतै पलायन भन्दा फरक नपर्ला । हेरौ उनका केहि बेवि बम्प तस्वीरहरु ।